လမ်း ဘေး နေ လမ်း ဘေး စား – Hlataw Entertainment
လမ်း ဘေး နေ လမ်း ဘေး စား
May 25, 2021 By admin News
(အပြင်းစား ဇာတ်လမ်းတို) ကိုယ့်စိတ် ကို မထိန်းနိုင်သူများ မဖတ်ရ၊ ဖတ်ပီး ထုမိ၍ အားကုန်ပါက အငယ်ကောင်နှင့် လားလားမျှ မဆိုင်ပါကြောင်း ချိတ်ချိတ်ချင်းမို့ ချိတ်မိတာ၊ အမှိုက်ရှိလို့ခွေးချီးလာသလို အသွင်တူလို့ပေါင်းမိထားတဲ့ ငထူးနဲ့ငတိုး။ နာမည်ကသာ ငထူး လူက ဘားးမှမထူး။ ငတိုးဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း သူခိုးသာသာ။ ခိုးဆိုးလုနှိုက် လမ်းဘေးနေလမ်းဘေးစားတွေ။ အမိမရှိ အဖမရှိ လူမှန်းမသိခင်ကလည်းလမ်းဘေးမှာ၊ လူမှန်းသိတော့လည်းလမ်းဘေးမှာ ဟုတ်နေရောဗျာ။
လူပုံစံတွေက ဘိန်းစားဆေးငတ် ဆေးပြတ်တဲ့ရုပ်၊ နံ ရိုးပတ္တလားနဲ့ ခြေသလုံးပုလွေရိုး။ စားသမျှအားနဲ့ အသားက လီးမှာများလာစု သလားပဲ။ လူတော်တော် လီးကြီးကြီး။ “မင်းလီးပြစမ်း” ငထူးကမေးတာ “ဒီမှာ. ဒါတောင် မတောင်သေးဘူးနော်” ပုဆိုးလှမ်ပြရင်း ငတိုးကပြောတယ်။ လမွှေး မဲမဲရှည်ရှည်များ ထူပိန်းစွာဖုံးထားတဲ့ ၇လက်မ ဝန်ကျင်လီးကြီးက ပျော့တွဲတွဲ လဥ၂လုံးကြားမှာ အိပ်စက်နေလျက်။ ငထူးက ပုဆိုးထဲ လက်သွင်းဆွရင်း “ငါ့လီးလည်း မင်းလောက်ရှိမယ်ကွ” “ပြစမ်း. ဟာ မင်းလီးက လီးမဲကြီးပဲ” အဟုတ် ငထူးက အသာညိုပေမယ့် လီးနဲ့လဥက ကပ္ပလီလီးကြီးလို ညိုညိုမဲမဲ ၆လက်မကျော်ဝန်းကျင်။ တောင်နေတဲ့ အချိန်တွေဆို မဲပြောင်တင်းထောင်ပီး ချောကလက်ရေခဲချောင်းကြီးလိုပဲ။
သုဓမ္မာဇ ရပ်တန်း အနောက်က သူတို့နေရာ ယာယီစံနန်းထဲမှာ တစ်ယောက်လီး တစ်ယောက် ပြရင်း ဏှာထနေတဲ့ သကောင့်သား၂ကောင်။ ဏှာထဆို သိတဲ့အတိုင်း သူတောင်းစားဗိုက်ဝရင်လီးတောင်တယ် ဆိုတဲ့ စကားပုံကလည်း ရှိတယ်မလား။ မနေ့ညက ကျောက်တော်ကြီးဘုရားပွဲမှာ နှိုက်ခဲ့တဲ့ ခါးပိုက်နှိုက်ငွေက ၂ယောက်ပေါင်း ၂သိန်းခွဲလောက်ရခဲ့တာဆိုတော့ နေကုန် သောက်စားမူးရူး.. မူးလို့ဝတော့ ဘူးကြောဆွဲကြတဲ့သဘော။ “ဒီညရော နှိုက်ဦးမလား” “အနှိုက်သီးသန့်တော့ မလုပ်ဘူးကွာ ကြုံရင်နှိုက်မယ်၊ မကြုံရင် ပွဲကြည့်မယ်၊ ခုပိုက်ဆံက ငါတို့ ၁ပတ်လောက် အသာလေး သုံးလို့ရပါတယ်” “၁ပတ်တောင် ကချင်မှကမယ် သုံးတက်ရင် ၂ပတ်လောက်ထိ အငြိမ်ကွ” ၂ဦးသဘောတူ ဒီညတော့ ဆက်ရက်မင်းစည်းဇိမ်ခံစားကြတော့မယ်။
၂ကောင်လုံးကလည်း မူးလာပီဆို ခွေးမတောင် အလွှတ်ပေးချင် တာမဟုတ်။ အလကားရတဲ့ စည်းဇိမ်ဆိုလို့ ဒါတစ်ခုပဲရှိတာ မဟုတ်လား။ အခြေမရှိအနေမရှိအဆင့်တွေမို့ ဘဝတူချင်းကတောင် အပေါင်းအဖက်မလုပ်ချင်ကြတော့ ညတိုင်းဂွင်းတိုက်၊ အချောင်ရရင် သံလမ်းဘေးက အရူးမတောင် ပါးစပ်အဝတ်စို့ လိုးကြတာဗျို့။ အဲ့လောက်ကို ထန်တာ။ ၈နာရီလောက် ဘုံဆိုင်မှာ အရက်ဖြူသောက်လေကြောရှည်။ “ဖာခေါ်ချချင်တယ်ကွာ” ငတိုးကပြောတာ “လီးးးဖာခေါ်ချပါလား မမှတ်သေးဘူးလား” ငထူးကပြန်ပြောတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ ဟို အရင်လတုန်းက နန်းရှေ့က လင်မယား၂ယောက်အိမ် ဝင်ခိုးကြတယ်။
ရွှေထည် ပစ္စည်းတော်တော်များ ရခဲ့ပီး ဈေးချိုမှာ သူခိုးဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းတာတောင် ၅သိန်းကျော်ရခဲ့တော့ ဖာတစ်ပွေ ခေါ်လိုးတာ တစ်ပတ်လောက်နေတော့ ၂ယောက်လုံး ဂနိုကျလို့ ဆေးကုခဲ့ရပါသေးကောလား။ ဖြစ်ပုံကဒီလို… “ဟျောင့် ငတိုး ငါလမ်းကြောတစ်ခုတွေ့ထားတယ် နန်းရှေ့က အိမ်တစ်အိမ်ကွ” “ဟေ ဟုတ်လား၊ ခိုင်လား? ခိုင်မှလုပ်နော် တော်ကြာဟိုတခါ စက်မှုထဲကအိမ်လို ခိုင်တယ်ဆိုပီး ဝင်ခိုးတာ ဘားးမှမရှိလို့ ပြန်ထွက်လာရတဲ့အဖြစ်နဲ့ကြုံနေမယ်” “ဟာ စိတ်ချ ဒီတစ်ခါတော့မလွဲဘူး၊ သူတို့ လင်မယားက မနက်ကမှ မင်္ဂလာဆောင်ထားတာ၊ ကံကောင်းရင် ဇာတ်ကားတောင်ကြည့်ချင်ကြည့်ရမှာ ဟီး” စပ်ဖြီးဖြီးနဲ့ ငတိုးက ပြန်ဖြေတယ်။ ညလူခြေတိတ်ချိန် အမှောင်ရိပ်ကို အားကိုးရင်း ငထူးငတိုး သူခိုး၂ယောက် အသစ်စက်စက် လင်မယားအိမ်ကို စတင် ချည်းနှီးဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပီ။ ခြံဝန်းကိုကျော် ၂ထပ်တိုက် အနောက်ဖက် မီးဖိုဆောင်ဘက်က တံခါးကို လွှနဲ့တိုက် သံပန်းကို ပိုက်ကိုက်နဲ့ဖြတ် သိပ်အချိန်မပေးလိုက်ရ၊ ၅မိနစ်စွန်းလောက်မှာပဲ ၂ယောက်သား အိမ်မကြီးထဲ အလွတ်အကျွတ်ဝင်ရောက်သွားခဲ့ပီ။
အောက်ထပ်က ကျွန်းဗီဒိုကြီးကို အသင့်ပါ လာတဲ့ သော့တုနဲ့ဖွင့်လိုက်တော့ အားပါးးပါးးး အနီရောင်ဗူးလေး၇ဗူးက အကြီးအသေးအစီအရီ။ အထဲမှာတော့ ဆွဲကြိုး လက်စွတ် လက်ကောက် နားကတ် ရွှေထည်ပစ္စည်းအမျိုးစုံ ပွပေါက်။ “လာ သွားမယ်” ငထူးက ပြန်မယ်လုပ်တော့ “နေဦး.. နားထောင်” အပေါ်ထပ်မှ အသံ “ဖုတ် ဖုတ် ဖက် ဖက်” “အင့် အင့် အ အ. အား အားး” ပွဲကြမ်းနေတဲ့အသံ။ ဘယ်နှချီမြှောက်လည်းတော့မသိ၊ အချိန်ကတော့ ၁နာရီကျော် ၂နာရီဝန်းကျင်။ “သွားကြည့်ချင်တယ်ကွာ” “ငါလိုးးး မိသွားမှ သေမယ် လာသွားမယ်” “ဟာ ခဏပါကွ မကြာဘူး”။
ပြောမရတဲ့အထန်ကောင် ငတိုး၊ ခြေသံလုံလုံနဲ့ ၂ယောက်သာ တက်သွားတော့ ညအိပ်မီး မှိန်မှိန်ထွန်းထားတဲ့ တံခါးခပ်ဟဟနဲ့ အခန်းးး “အား အားး အမလေးး အ. အား” “ဖုတ် ဖုတ် ပြွတ် ဘွတ် ဖက် ဖက်” အနီရောင် မွေ့ယာကြီးပေါ်မှာ လိုးပွဲဆင်နေကြတဲ့ လင်မယား ၂ယောက်။ “အား ကောင်းလိုက်တာ ကိုရယ် စောင့် စောင့် နာနာလေးစောင့်” “အင့် ရော့ အင့် အား” အားပါး ပါးး မှိန်ပျပျမီးရောင်အောက်မှာ ဇိမ်ပြေနပြေ လိုးနေကြတာ၊ လိုးတဲ့သူမပြောနဲ့ ချောင်းကြည့်တဲ့ ငတိ၂ကောင်တောင် လီးတော်တော်တောင်ပီး ဖီးလ်လာနေပီ။ စော်ခါးအောက်ကို ခေါင်းအုံးသွင်းထားပီး အပေါ်ကနေ ကျားစီးဝါစီး လှေကြီးထိုးနည်းနဲ့ လိုးခွဲနေတာ။ စောက်ဖုတ်ထဲက အဖြူပျစ်ပျစ် အရည်တွေစိမ့်ထွက်နေတယ်၊ ဘဲကြီးရဲ့ ဖြူဖြူရှည်ရှည် လီးကြီးကလည်း ပြွတ်ကနဲမြည်အောင် ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် နဲ့ လိုးနေတာ။ တိုင်ပင်မထားရ၊ ၂ကောင်လုံးလည်း ပုဆိုး စလွယ်သိုင်းပီး မျက်စိအစားကြွေးကာ ဂွင်းစထုနေကြတော့တယ်။
အထဲကလင်မယား၂ယောက်က လိုး အပြင်က ငထူးငတိုး ၂ယောက်ကထု… ၅သိန်းကျော်နဲ့ ရေလျှံနေတဲ့ သူတို့၂ယောက် ညဖက် ကျုံးဘေးက အသက် ၃၀ဝန်းကျင် အိုးကောင်းကောင်းနဲ့ စော်ကြီးကို ၂သောင်းနဲ့ သူတို့နေတဲ့ သုဓမ္မာအနောက် ကျွန်းတောထဲခေါ်ခဲ့ကြတယ်။ မိုးကာစခင်း အဝတ်တိုးလို့တွဲလောင်း ကာထားတဲ့ သူတို့ ၂ယောက်နေအိမ်။ “တစ်ယောက်တစ်လှည့်လိုးမှာမလား? ကွန်ဒုံးရောသုံးမှာလား?” “ဘားးမှမသုံးဘူး အလွတ်လိုးမှာ” “ကွန်ဒုံးသုံးရင် ဖီးလ်ကိုမလာတာ” ဘာကျန်းမာရေးအသိမှ မရှိတဲ့ကောင်တွေ ဖာသည်ကို အလွတ်လိုးဖို့ တာဆူနေကြတာ။ ဖာသည်ကတော့ ပိုက်ဆံရဖို့က သူ့လိုရင်းမို့လား၊ သုံးတာ မသုံးတာက လိုးတဲ့သူအပိုင်းလေ မဟုတ်လား။ တချို့ ကွန်ဒုံးမသုံးရင် မခံဘူးဆိုတဲ့ ဖာသည်တွေလည်းရှိပါတယ်။
“သုံးချင်သုံး မသုံးချင်နေ ဖင်တော့ မလိုးနဲ့နော်၊ ကြိုပြောထားတာ” လေးဖက်ကုန်းပေးထားတဲ့ အိုးကားကားနဲ့ စော်ကြီးရဲ့ အနောက်မှ ငထူး၊ အရှေ့မှ ငတိုး၊ ထိပ်ပိတ်နောက်ပိတ်ဆိုတာဒါမျိုး။ “အား ကျွတ် ကျွတ်” ငထူးရဲ့ ထူးမှထူးတဲ့ ခေါင်ကြီးကြီးလီးမဲကြီး စောက်ဖုတ်ထဲ တဆုံးဝင်သွားတော့ စော်ကြီးက ညီးတယ်။ ညီးဆို လီးက အကြောအပြိုင်းပြိုင်းနဲ့ နဂါးပတ်တောင်ပါလိုက်သေးဆိုတော့ အီတာပေါ့။ အရှေ့မှာတော့ ပျော့တွဲတွဲ လဥကြီး၂လုံးတွဲကြနေတဲ့ ငတိုးရဲ့ ၇လက်မ လီးသန်ကြီးက ပါးစပ်ကို စောက်ဖုတ် အမှတ်နဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလိုးနေတာ ဖွီး ဖွီး နဲ့ စော်ကြီးခမျာ အန်ဖက်တွေစို့ နှပ်ချီးတွေထွက်။ ၂ကောင်သားက အနှစ်နှစ်အလလက အောင်းထားတဲ့ လိုးစိတ်ညှော်စိတ်တွေကို အစွမ်းကုန် ထုတ်သုံးနေတော့တာ၊ ဖြောင်း ဖြောင်းနဲ့ကို နေတာဟေ။ “ဟျောင့် မင်းချည်လိုးမနေနဲ့ နေရာလဲဦး” နေရာလဲ ထပ်လိုးကြပြန်ရော။ “အင့် အင့်” တဆုံးစောင့်တာများ ဗောင်း ဗောင်းနဲ့တောင်မြည်တယ်။ စော်ကြီးဆိုတာ လီးစို့ထားရက်က ဝူး ဝူး ဝါးဝါးနဲ့ အော်နေတော့တယ်။
စောက်ဖုတ်အသနီလှန် မျက်ဖြူစိုက်လို့ မျော့မျော့လေးပဲ ကျန်တော့အောင် အသကုန်ပွဲကြမ်းလိုးလိုက်တာ လရည်ပျစ်ပျစ်တွေ ဗျစ်ကနဲ ဗျစ်ကနဲ စောက်ဖုတ်ထဲရော ပါးစပ်ထဲပါ ပန်းထည့်ရင်း ပီးသွားကြပါရော။ တစ်ပတ်လောက်နေတော့ ၂ယောက်သား လီးတွေယား၊ သေးပေါက်ရင်ကျဉ်နေပီး အဖြူအဖက်တွေရောပါလားလို့ ခုခံကျကာလသားဌာနကို ပြေးခဲ့ကြရဖူးတယ်။ တော်သေးတယ် ၃ပတ်လောက် ဆေးထိုးယူလိုက်မှ သက်သာသွားတယ်။ ၉နာရီတောင်ကျော်ပီ။ စတိတ်ရှိုးဆိုသံတွေညံနေတဲ့ မိုးကြိုးငှက်ငယ်လေးများအဖွဲ့ရဲ့ ဇာတ်ရုံထဲ တစ်ယောက် ၅ရာပေးပီး ဝင်ခဲ့ကြတယ်။
အထဲမှာတော့ အများစုက ယောက်ကျားများနဲ့ မိန်းမပုံစံဝတ်ထားကြသော အ၆မများ။ ပွဲကြည့်စင် သီးသန့်မရှိ၊ ၆ပေလောက်အမြင့်ရှိတဲ့ စတိတ်စင်ပေါ်မှာ ရင်သားဖွင့်ဖွင့်ထွားထွား တင်သားဖုဖုထစ်ထစ်နဲ့ ဖုန်းကညာတပါးတို့က လိင်စိတ်ကြွဖွယ် အဝတ်အစား အတိုအပေါ်များနဲ့ သီဆိုကပြ ဖြေဖျော်… အောက်ဖက်မှ ပုရိသားအပေါင်းက မူးရူးကွဲပြဲ ကခုန်မြူးတူး၊ ငထူးနဲ့ ငတိုးတို့ ၂ယောက်လည်း အုံးအုံး အုံးအုံး ဒစ်စကိုမြူးဇစ်များကြား လိုက်ပါစီးမျောနေတော့တာ။ မကြာပါဘူး အရှေ့ကနေ နုတ်ခမ်းနီ ပါးနီ အပြည့်နဲ့ အ၆မ ၂ယောက် လာကတယ်၊ ဖင်ကြီးတွေ အနောက်ပစ်ပစ်ပီး ထူးနဲ့တိုးတို့ ၂ယောက်ကို သွေးတိုးလာစမ်းနေတာ။ အထာပေးရင် ဆရာလေးတောင် အလွတ်မပေးတဲ့ သကောင့်သာ၂ယောက်ကလည်း ကသလို ခုန်သလိုနဲ့ ဖင်ကို ပြေးပြေးစောင့်တော့တာ၊ လက်နောက်ပြန်ပေးပီး လီးကိုလာပွတ်ရောဗျာ၊ “အပြင်သွားမလား” ငထူး နားနားကပ်ပြောလိုက်တယ်။ အ၆ဆိုတာလည်း မစားကောင်းတဲ့အသီးမှမဟုတ်တာ၊ ပွဲတော် အခါဆိုတော့ ရာသီစာမို့လား။ ငတိုးဆို ဟို အ၆မကို ခါးဖက်ပီး ကတောင်နေပေါ့။ “ဟျောင့် မင်းတစ်ယောက်ခေါ်ခဲ့ ငါတို့အပြင်သွားကြမယ်” “အေး”။ ကုသိုလ်တော်ဘုရား အနောက်ဘက်က ခြင်းဝိုင်းကွင်းဘက်ကို ဆိုင်ကယ်၂စီးနဲ့ မောင်းထွက်လာကြတယ်။
ငထူးနဲ့က တစ်စီး၊ ငတိုးနဲ့ကတစ်စီး။ မှောင်ရိပ်ခိုနေ ကြတာ သူတို့တင်မဟုတ်၊ တစ်ချို့တွေများဆို ဆိုင်ကယ်မီးလင်းလင်းနဲ့ ဝင်လာတာတောင် ဂရုမစိုက်အား လိုးနေလိုက်ကြတာများ ဖင်ကြီးတွေကိုပြောင်လို့။ မြေကြီးပေါ် ပုဆိုးခင်း လိုးနေတဲ့အတွဲနဲ့ ဆိုင်ကယ်ပေါ် မောက်ခိုင်းပီး ဆွဲနေတဲ့အတွဲနဲ့ အဲ့ သစ်ပင် အုပ်အုပ်ထဲမှာကို ၄တွဲလောက်ရှိမယ်။ သူတို့အတွဲ ၂တွဲနဲ့ဆို ၆တွဲ။ ငထူးတို့အတွဲ အုတ်တံတိုင်းထောင့်နား ဆိုင်ကယ်ရပ်လိုက်ပီး၊ ဇာတ်လမ်းစကြပီ။ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာတော့ ငတိုးတို့အတွဲက အမှုတ်အစုပ်တောင်လုပ်နေပေါ့။ အ၆မ အမှုတ်ကျွမ်းချက်ကတော့ “အား အား အင်း စုပ် စုပ် ကောင်းတယ် အား ရှီး” လဥတွေကို တစ်လုံးပီး တစ်လုံးပြောင်းငုံ၊ လမွှေးတွေကိုနမ်း၊ ရှာရှာဖွေဖွေ ဂျိုင်းကို မြှောက်ခိုင်းပီး ဂျိုင်းမွှေးတွေကိုပါယက်တာ။ အား လက်လန်တယ် ဘာတွေဖီးလ်လို့လည်းမသိ၊ ငထူး လီးကတော့ မီးတောက်မတက်ကို ပူနေပီ။ အ၆မကြီးက အင်္ကျီအထက်မ သူ့ နို့ကြီး ၂လုံးကို အပြင်ထုတ်ပီး “နို့စို့ပေး”။ ငထူးလည်း တုံ့ဆိုင်းမနေတော့ဘဲ ပြွတ်ပြွတ်ပြတ်ပြတ် နဲ့ စို့ပေးလိုက်တယ်။ “အို..အိုးးး ရှီးး အားး ကောင်းလိုက်တာမောင်ရယ်” “လေးဖက်ကုန်းပေး” “စို့ပါဦး လိုးတော့မှာလား” “အင်း လိုးကြစို့ တော်နေကြာ ပတ်ကင်းနဲ့မိနေဦးမယ်”။
“အ. အ. အား အား” “ဖြောင်း ဖြောင်း ဗောင်း ဗောင်း” ငတိုးတို့အတွဲ လိုးနေတာ။ ငတိုးက အောက်ကနေ ပတ်လက်၊ အ၆မက အပေါ်ကနေ တက်ခုန်ပေးတာ၊ အားမရလို့ အောက်ကနေ ပင့်လိုး လိုးနေတဲ့ပုံ။ ဖင်ပူးတောင်းထောင် လေးဖက်ကုန်းနေတဲ့ အ၆မဖင်ကြီးကို ညှစ်ဆွဲဗြဲပီး စအိုဝကို လီးတေ့ကာ ဖိချလိုက်တယ်။ “ဖလွတ် ဗြွတ်” “အိုးးးကျွတ် ကျွတ်.”စုတ်တသပ် သံနဲ့ ညီးလာတယ်။ ဖင်သားတွေကို ညှစ်ရင်း ဖြောင်း ဖြောင်းနဲ့ လိုး ရတာ စောက်ရမ်းဖီးလ်ရှိတယ်ကွာ။ “အူး အု အား ရှီး” “ဖွတ် ဖလွတ် ဖုတ် ဖုတ် ဖက် ဖက်” ပါးစပ်ကလည်း အသံစုံထွက် ဖင်ကလည်း အသံစုံမြည် နို့အုံကြီးကို ဆွဲလွဲပီး စည်းချက်ညီညီ လိုးဗြဲနေတော့တယ်။ လဥ ၂လုံးက အရှိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ ဖက်ဖက် မြည်ရင်း ရိုက်နေတာ ကြာတော့လဥတွေတောင်အောင့်လာတယ်။
“အရှေ့ကနေ စောင့်ပေး” ငထူးပြောလိုက်တော့ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်ကာ စောင့်ပေးပါတယ်။ အေးဆေး အသာလေး ခါးကော့ပေးထားလိုက်တယ်။ သိပ်မကြာဘူး လီးတစ်ချောင်းလုံး ပူထူပိန်းရှိန်းသွားပီး လရည်များ ဖျစ်ဖျစ်မြည်စွာ ဖင်ခေါင်းထဲ ပန်းထည့်လိုက်တော့တယ်။ လီးကိုဆွဲချွတ်လိုက်တော့ လီးတစ်ချောင်းလုံး ဝါထိန်ကာချီးတွေပေလို့ပါပဲ… လောကကြီးက နေတက်ရင် ကျေနပ်စရာ။ ငထူးနဲ့ငတိုး ခိုးဆိုးလုနှိုက် ငမိုက်သား၂ယောက် ထောင်တို့ အချုပ်တို့ဆိုတာလည်း ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်။ လူကောင်းဖြစ်လာဖို့ ကံဇာတာမပါတဲ့ သူတို့၂ယောက် လောကကြီးကို ဇောင်းငမ်းဇောင်းငမ်းကြည့်ရင်းနဲ့ပဲ လမ်းဘေးနေ လမ်းဘေးစားဘဝနဲ့ ဖြတ်သန်းကြဦးမှာ အသက်ရှည်နေသ၍ပေါ့ဗျာ…(ပြီးပါပြီ)
နောင် တ နောက် ကွယ်
ဖြေး ဖြေး နော် မောင်